NEWS	Royal School of Myanmar တွင် Practical Business Management Course ဖွင့်လှစ်မည် ယနေ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျှက်ရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော မည်သူမဆို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမို ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် Practical Business Management Course ကို ပို့ချပေးလျှက်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသွားရန်ပြင်ဆင်နေပြီး.....
Read More �� TECH Training Centre က ပဲခူးမြို့တွင် ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် လူငယ်များ၏အနာဂတ်တောက်ပရေးအတွက် အစဉ်ကြိုးပမ်းလေ့ကျင့် နေသော TECH Training Centreသည်နိုင်ငံ အနှံ့ ရှိလူငယ်များကိုပါ ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့ကျင့်နိုင်ရေးအတွက် ပဲခူးမြို့တွင် .....
Read More ��	LATEST Local News
ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ ITPEC စာမေး ပွဲများ ကျင်းပမည်
၁၀ တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် IELTS အကြောင်း သိကောင်းစရာ
YCTC တွင် ဆွေးနွေးဟောပြောမည်
မင်းပညာဒါနအိုင်တီနှင့် ဘာသာစကားအခမဲ့ ပညာဒါန သင်တန်းများ
သြဂုတ်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည် ၁ဝ တန်းအောင် နှင့် ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်
Go to All Local News ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ့ကို ရယူလိုသောကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ NIM (Nanyang Institute of Management) နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော University of Ballarat (Australia) မှ MBA ပညာရပ်ကို တက်ရောက် သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား/ကျောင်း သူများအတွက် အထူး အစီစဉ် Scholarship ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပညာသင်ဆု အတွက် S$3000 ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute of Management တွင် ပညာသင်ကြားရမည်......
Read More �� မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဂျပန်နိုငံ APU တက္ကသိုလ်မှ 100% Full Scholarship ပေးအပ်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံ Asia Pacific University (APU) မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအတွက် 100% Full Scholarship ပေးအပ်မည့် အကြောင်း နှင့် လျှောက်ထားနိုင်မည့်ဘာသာရပ်များ၊ ဝင်ခွင့်အချက်အလက်များ အကြောင်းကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ အချိန် 10:00 am to 12:00 noon, Park Royal Hotel ၊ ပတ္တမြားခန်းမ (၄) ၊ ၌ ယင်း APU ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာရောက်......
Read More ��	LATEST International News
နယူးဇီလန်နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်များဝင်ခွင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး
အကြိမ်လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြမည်၊၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့(၆)လလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် Master of Arts in
Tourism Management အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ . ကျောင်းသားများ ကို
�Singapore-UK-Australia-New Zealand ပညာရေးပြပွဲကျင်းပမည်� PSB Academy ၏ Engineering Diploma ကိုတက်ရောက်မည့်
သူများအတွက် Study Grants ပေးရန် Interview Sessions
Professional Certificate in Marketing Management Course ကို YCTC (Yangon Consultancy & Training Centre) ၌ ၄ ပတ် သင်
တန်းကို ရုံးချိန်လွတ် ဖွင့်မည်။ Go to All International News...
ARTICLES	THE STRAITS TIMES ၏ Prime News သတင်းစာကို ဘာသာပြန် ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
သီးခြား လစာလေ့လာ ရေးသုံးသပ်ချက်(၂)ခုအရ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် စကာင်္ပူနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရန် ရှာဖွေ နေကြသဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရပြီး စသူများ အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ဘွဲ့ ရပြီးသူများထက် လစာ အနည်းငယ် ပိုရရှိကြသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေး အတိုင်ပင် ခံဟေးအဖွဲ့ (Hay Group) မှ အလုပ်ဝင်ခါစ သူများအတွက် - ယခုနှစ်ထက် ဘွဲ့ရပြီးစတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှ လစာသည် စကာင်္ပူဒေါ်လာ- ၂၅၉၃ ဖြစ်ရာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်...... Read More » LATEST Articles
ဘာသာရပ်များထပ်တိုးလိုက်သော်လည်း ကျောင်းလခမပြောင်းလဲသော PSB Academy နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းမှီ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် NIM Diploma in Construction Engineering နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းမှီ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် NIM Diploma in Construction Engineering ယူကေကျောင်းသားဗီဇာလျောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆက်တွဲ အပြောင်းအလဲများ ဂျူလိုင် (၄) ရက်မှစ၍သက်ရောက်မှု့ ရှိတော့မည်
Go to All Articles... SEMINAR	ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်တွင်း ၌ ပညာသင်ယူလျက်ရှိသော (၉) တန်း၊ (၁ဝ)တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့် ပညာရေး လမ်း
ကြောင်းများ၊ အထူးပြု ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး ဖြင့်
ဘွဲ့ရရှိထားသော ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ
အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာ ရပ်အလိုက် ဆက်လက် သင်ယူသင့်သည့် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးလမ်းကြောင်း
များ အကြောင်း ဆွေး နွေးပွဲကို........
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.9.2012(sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - ဟိုတယ်မန္တလေး(စံပယ်ဖြူခန်းမ)
Local Education Interview
International Education Interview
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မေးမြန်းမှုများကို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Read More » Do and Don't 